Hawlgal ay fuliyeen Booliska Burco oo sababay dhimasho iyo dhaawac | RBC Radio	Home
Tuesday, October 2nd, 2012 at 01:58 am	/ 5 Comments Wednesday, July 18th, 2012 at 05:00 pm Hawlgal ay fuliyeen Booliska Burco oo sababay dhimasho iyo dhaawac
Burco(RBC):- Hal qof ayaa ku dhintay, mid kalena wuu ku dhaawacmay hawlgal ciidanka ammaanka magaalada Burco ee Somaliland ku doonayeen inay ku qabtaan nin ay sheegeen inay ku raad-joogeen.
Ninka Ciidanka Boolisku ku dileen hawlgalka ay fuliyeen oo magaciisu la odhan jiray Muuse Jaamac, waxay sheegeen inuu ahaa nin ay in muddo ah raadinayeen, kaasoo markii la isku dayey in la qabto ay labada dhinac rasaas is weydaarsadeen, halkaasna uu ku dhintay ninkaasi.
Sidoo kale, waxay isla hawlgalkaas ciidanka ammaanka Burco ku dhaawacmay Askari lagu magiciisa lagu sheegay Maxamed Xasan Cabdillaahi, waxaana lagu daweynyaa Cisbitaalka guud ee magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer.
Tallaabadan oo shalay fuliyeen ciidanka Booliska Burco ayaa noqonaysa tii saddexaad ee ay cid ku dilaan sidan oo kale ay doonayeen inay u qabtaan ciidanka ammaanka magaalada Burco. Inkasta oo aanay Boolisku wax tafaasiil ah ka bixinnin sababta ninka dhintay loo daydayey ama ay u baadi-goobayeen.
Geesta kale, Saraakiisha ciidammada Booliska Burco oo arrintan warbaahintu wax ka weydiisay, ayaa ka gaabsaday inay wax faahfaahin ah ka bixiyaan, isla markaana waxay ku tilmaameen arrin ciidan oo aan la oggolayn in warbaahinta looga warramo.